Minnesota waxay ku taallaa xudunta: Waxaan ognahay inay bulshadu ku fiicnaadaan marka ay leeyihiin biyo nadiif ah oo la cabo iyo harooyin, dhuxulo iyo wabiyo, laakiin wax soo saarka beeraha, qaybta hoose ee dhaqaalaha Minnesota, waxay sii wadi doontaa in ay sumoobaan biyaha leh heerarka sare ee nitrogen, fosfooraska, iyo masagada . Magaalooyinka iyo magaalooyinka yaryar ee ku yaal gobolka ayaa la qabsanaya isku-dhafka kaabayaasha gabowga iyo baahida sii kordheysa ee biyaha loo nadiifiyo maadaama ay hoos u dhacayso tayada. Siyaasadaha aan ku heysano buugaagta kuma filna in ay abuuraan isbadalada loo baahan yahay si loo hagaajiyo loona ilaaliyo tayada biyaha. Marka sidee ayaan ula xiriiri karnaa arrimaha tayada biyaha ee deg dega ah?
"... waraysiyadan waxay tilmaameen baahi loo qabo in la galo daneeyaal ballaaran oo daneeyayaasha ah oo ka yimid qaybo aan dhaqan ahaan ka mid ahayn wadahadalka ..." -JULIA OLMSTEAD, MISSISSIPPI XILKA BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA
Si aad uga jawaabto su'aasha, barnaamijka Mississippi River ayaa ku hawlan Isgaarsiinta SDK si aad si qoto dheer u dhageysatid fikradaha daneeyayaasha biyaha ee Minnesota. Hadafka cilmi-baaristani waa in la fahmo sida ay dadka reer Minneapolis uga soo jeeda gobollo kala duwan iyo qaybaha ay ka fekeraan oo ay mudnaanta siinayaan biyaha. Maanta waxaan sii deyneynaa warbixin Isku-dubbarididda wareysiyada-muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah oo ku wajahan waqtigii loogu talo galay in lagu caawiyo McKnight, deeq bixiyeyaasha, iyo la-hawlgalayaasheenna waxay tixgeliyaan waxa la samayn karo si loo ilaaliyo lana hagaajiyo tayada biyaha ee Minnesota.
Wareysiyadu waxay bixiyeen aragtiyo dhowr ah. Midkasto, halka qof walbaa aaminsan yahay in tayada biyaha ay muhiim tahay, qaar yar ayaa u dhiganta mudnaanta koowaad. Waxaan sidoo kale ogaanay sida kuwa ka shaqeeya qaybaha ugu saameynta tayada biyaha ay ka mid yihiin kuwa ugu aqoon badan uguna ra'yiga gobolka-laakiin daneeyayaashu waxay leeyihiin ilo xogeed oo kala duwani, aynaan lahayn faham wadaag ah dhibaatooyinka iyo xalalka suurtagalka ah. Waxaa laga yaabaa in ay muhiim tahay, waraysiyadani waxay tilmaameen baahi loo qabo in la galo daneeyaal ballaaran oo daneeyayaasha ah oo ka kala yimid qaybo aan dhaqan ahaan ahayn qeyb ka mid ah wada hadalka, oo ay ku jiraan caafimaadka dadweynaha iyo daryeelka caafimaadka, warshadaha aan miyiga ahayn, iyo magaalooyinka iyo dadka miyiga ah ee aan helin cabitaan nadiif ah biyaha.
Waddada tayada biyaha ee Minnesota waxay ku xirnaan doontaa go'aamo weyn oo ku saabsan dhismooyinka malaayiin doolar ah iyo waliba malaayiin doorasho yaryar oo shaqsiyadeed maalin kasta. Waxaan rajeyneynaa in cilmi-baaristaan iyo shaqadeeda ay ku wargelinayso in ay abuuri doonto wada-hadal cusub oo Minnesota ah oo ku saabsan sida loo hagaajin karo tayada Wabiga Mississippi iyo dhammaan biyaha kale ee Minnesota ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka.